» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १७
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १७
१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०५:३१
मकवानपुर, १९ बैशाख । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को सुर्खेत अडिसनबाट ९ जना प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् । दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका प्रतियोगीहरुको जानकारी दिने उदेश्यले तयार पारिएको यस भिडियो सिरिजमा हामीले यसअघि नै पोखरा, बुटवल, चितवन र धनगढी अडिसनबाट छनौट भएका प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ । यदि तपाईले ती भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानलको भिडियोहरु हेर्ने अप्सनमा गएर हेर्नसक्नुहुनेछ । ती भिडियोहरुका लिंक यस भिडियोको अन्तिम र डिस्क्रीप्सनमा पनि राखिएका छन् । यस भिडियो सिरिजको सत्रौँ भागमा सुर्खेत अडिसनबाट छानिएका ९ जना प्रतियोगीहरुमध्ये पहिलो ३ जना प्रतियोगीहरु अर्जुन पुन मगर, दिपिका बस्नेत र प्रेक्षा लम्सालका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो–
३) प्रेक्षा लम्साल– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि सुरखेतबाट छानिएकी तेस्रो प्रतियोगी हुन् प्रेक्षा लम्साल । दाङकी २१ वर्षीय प्रेक्षाले यसअघि द भ्वाईस अफ नेपालको सिजन १ र २ मा पनि सहभागिता जनाएकी थिईन् । भ्वाईस अफ नेपालको सिजन २ मा चारै जना कोचलाई आफुतिर फर्काउन सफल उनी ब्याटल राउण्डसम्म पुगेकी थिईन् । सानैदेखि गीत गाउन रुचाउने प्रेक्षाले औपचारिक रुपमा संगीत पनि सिकेकी छिन् । दोस्रो परिवारसँग बसेका आफ्ना बुवा सँगै भएको भए सायद आफुलाई अझ बढी हौसला हुन्थ्यो होला भन्ने सोच राख्ने प्रेक्षाले अध्ययन र संगीतलाई एकसाथ अघि बढाएकी छिन् । उनी मिठो कविता लेख्न र वाचन गर्न पनि माहिर छिन् । उनी नेपाल स्टारलाई नै आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम रियालिटी शो बनाउने सोचमा छिन् । त्यसपश्चात उनले रियालिटी शोमा सहभागी नभईकनै संगीत क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सोच राखेकी छिन् । उनले अडिसनमा ‘हर रात’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । निकै नै दमदार प्रस्तुति दिएकी प्रेक्षालाई संगीतकार आलोक श्रीले स्टेजमा गएर उनलाई छनौट गरेका थिए । सोही गीतबाटै निर्णायकहरुको मन जितेकी प्रेक्षाले छनौट पश्चात पनि गायिका अञ्जु पन्तको ‘ए हजुर’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।